SD: waa in la sooro go'aan lagu joojinayo dhamaan qaxootiga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Jimmie Åkesson (SD) Foto: Irma-Liisa Pyökkimies / Sveriges Radio Sisuradio
SD: waa in la sooro go'aan lagu joojinayo dhamaan qaxootiga
La daabacay fredag 29 augusti 2014 kl 16.07
Xisbiga shisheeye diidka ah SD ayaa doonaya in la soo saaro go’aan ah in la joojiyo qaxootiga dalka soo galaya aan ka aheyn qaxootiga Qaramada Midoobey waddamada u qoondeyso.
Go’aanka ay doonayaa xisbiga SD ayey ku sheegaan in uu yahay go’an la mid ah mid horey loo gaaray muddo 25 sanno ka soo wareegtay, oo ay gaartay xukumadii markas tallada heysay oo ay ku yareysay qaxooti faro badan oo markas dalka ku soo qulqulayey.
Laakiin sida xisbigan doonayo haddii loo yeelo oo la soo saaro go’aan noocas ah ayaa haddana saameynta uu yeelanayo go'aankas aad u yartay. 20.000 ee dalkan sannadka laga siiyey magangeliyada 300 oo ruux ayuu go’aan noocan ah saameyn lahaa oo dalka laga celin lahaa. Waxaana taas u sabsab ah xeerarka caalamiga ee qaxootiga oo noocyo badan leh sida uu yeri Carl Bexelius oo dhanka sharciyada u qaabilsan laanta socdaalka.
- Waxaan arrintan ka jira sharuuc caalamiya oo badan. Fursad ay xukumadda go’aan kaga gaari karto in koox gooni ah Magangeliyo la siin waa iska yartahay, arrin sidii waagii hore ma ahan maanta, ayuu eri.